Mogadishu Journal » 2019 » July » 8
Mjournal ;-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar dhulka uga soo baxay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug. Wafdiga uu Ra’iisul...
Mjournal :-Maxkamadda magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa waxa ay maanta xukun ku riday Weriye Cabdi-Maalik Muuse Coldoon oo in ka badan Sedax bilood ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. Weriye Coldoon ayaa Maxkamaddu ku xukuntay Seddax sano iyo Lix bilood oo xarig ah,...
Ciidamada Dowladda iyo Rag hubeysan oo ku dagaalamay Muqdisho
Mjournal :-Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay Isgoyska seybiyaano ee degmada Hodan ee Gobolkan Banaadir,kadib markii rag hubeysan oo watay gaari nooca raaxada ah ay weerareen koontorool ay halkaasi ku leeyihiin Ciidamada Dowladda. Dagaal muddo kooban socday ayaa Goobjoogayaal...
Mjournal :-Hay’adda Nabad-sugida iyo sirdoonka Qaranka ayaa ka hadashay gaarigii laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa ee Maanta ku qarxay agagaarka Isgoyska Digfeer ee degmada Hodan gobolkan Banaadir. War kasoo baxay hay’adda oo lagu daabacay barta twitter-ka NISA ayaa lagu sheegay...
Somaliland oo ka hadashay ajnabi la weeraray
Mjournal :-Todobaadkii la soo dhaafay ayaa dad careysay oo ka mid ahaa muruq maalka dekadda Berbera ee Soomaaliland waxaa ay weerar sababay dhaawacyo culus ay ku qaadeen qaar ka mid ah Shaqaalaha Xamaalada Ajaanibta ah ee ka howlgalla dekada Magaalada Berbera,waxaana markii ugu...
Dagaal beelleed ka dhacay gobolka Sanaag
Mjournal :-Ugu yaraan lix ruux ayaa la sheegay in ay ku dhinteen tiro kalana ay ku dhaawacmeen dagaal gelinkii dambe ku dhex maray labo maleeshiyo beeleed deegaan ku dhow degmada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag. Dagaalka oo mudda saacado ah socday ayaa iskiis u istaagay iyadoo aan...
Mjournal :-Gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa ayaa ku qarxay bar koontarool oo ku taal meel ku dhow isgoyska Digfeer ee magaalada Muqdisho. Wararka waxa ay sheegayaan in ciidamo ku sugnaa meel ku dhow isgoyska ay ka shakiyeen gaariga kuna amreen labo ruux oo saarnaa inay...
Mjournal :-Siciid Cabdullaahi Deni Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa waxaa uu Magacaabay Hanti-dhowraha guud Guud iyo Agaasimayaasha Bangiga iyo Wasaaradda Maaliyadda Puntland , kadib wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha Maamulkaas. Hoos Ka Akhriso wareegtada...
Xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ayaa maanta oo Axad ah ku guuleystay Koobka Aduunka ee Dumarka, kaddib marki ay 2-0 uga badiyeen dhiggooda Holland, ciyaarti kama daneysta aheyd. Labada gool ee ay Mareykanka ku garaaceen xulka Netherlands ayaa waxaa qeybti labaad kala...
Al-Shabaab oo mar kale toogasho ku fuliyay 4 Ruux
Mjournal :-Al-Shabaab ayaa shalay Gelinkii dambe waxaa fagaaro ku yaalla degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose waxaa ay ku toogteen Afar ruux oo mid ka mid ah ay haweeney aheyd,waxaana dadkaasi saddex ka mid ah lagu eedeeyay inay la Sahqeynayeen Ciidamada Dowladda iyo...